တရုတ်ပြည်တွင် တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်စားသုံးမှုအကြောင်းရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေကို ဖယ်ထုတ်ပီ – Medical Sharing
ဒုက္ခ နှင့်​ ကြုံရ​တော့မဲ့ သခင်အတွက် အသက်ပေးသွားတာ …. ခွေးတွေ သစ္စာရှိပြီဆိုရင် လူတွေထက်သာတယ် ❤️
ကံမကောင်းဘူးဆိုရင် ကံကောင်းအောင် ဘာလုပ်ရမှာလဲ ??? ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ
စက္ကန့် (၆၀) အတွင်း အိပ်ပျော်စေမယ့် အသက်ရှုလေ့ကျင့်ခန်း (လူတိုင်းအတွက် အသုံးတည့်လွန်းပါတယ်)
တရုတ်ပြည်တွင် တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်စားသုံးမှုအကြောင်းရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေကို ဖယ်ထုတ်ပီ
February 12, 2020 Dr Mrs Mg
ကွဲပြားခြားနားသောတိရိစ္ဆာန်များနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုဖြန့်ဝေပေးသောဤစာအုပ်တွင်မျက်နှာဖုံးဖုံးအုပ်ထားသော civet အသားသည် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် SARS ဖြစ်ပွားမှုကိုဖြစ်စေသည်ဟုဖော်ပြထားသည်။မျက်နှာဖုံးစွပ် civet ၏အဆီသည်အလှကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုတွင်ကုန်ကြမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။
Hubei ပြည်နယ်ရှိ Wuhan University Press မှထုတ်ဝေသူ coronavirus ဝတ္ထု၏ကူးစက်ရောဂါဌာနသည်အင်္ဂါနေ့ကပြောကြားသည်မှာစာအုပ်အားလုံးသည်အရောင်းဆိုင်များမှစာအုပ်များကိုချက်ချင်းဖယ်ရှားလိုက်ပြီးအခြားသက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရပ်များကိုလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက်တွင် netizen သည်တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များကိုစားသုံးရန်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟုစာအုပ်တွင်မသင့်လျော်သောဖော်ပြချက်ပါရှိသည့်အွန်လိုင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစာအုပ်မေလ 2017 ခုနှစ်တွင်ပြန်လည်ပုံနှိပ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
Children’s book with passage on wild animal consumption pulled
A children’s book containingadescription of eating wild animals has been removed from all outlets across the country.
The book, which relays information about different animals , states the meat of masked civet, which was believed to cause the SARS outbreak in 2003, is edible.
It also said the fat of the masked civet is used as raw material in cosmetics productions, and its fur can be made into gloves.
The publisher, Wuhan University Press in Hubei province — outbreak center of the novel coronavirus — said on Tuesday it has immediately removed all the books from sales outlets and other relevant matters are under investigation.
On Feb 10,anetizen posted an article online claiming the book contained an inappropriate statement, that it was acceptable to eat wild animals. The book was found reprinted in May 2017.
Previous Previous post: ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပျံ့နှံ့မှုကိုကာကွယ်ရန် ပိုးသန့်ဆေးဖြန်းမှုများကို ပိုမိုလုပ်ဆောင်နေ
Next Next post: ရေဦးတွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို သတ်ဖြတ်မီးရှို့ခဲ့သူ ရဲတွေဖမ်းမိ
ခြေဖနောင့်ကွဲခြင်း၊ လက်အသားမာတက်ခြင်း၊ ချွေးနံ့နံခြင်းတို့အတွက် အိမ်တွင်းဆေးနည်း
ကျောက်တည်ဝေဒနာရှင်များ သောက်ဖြစ်အောင် သောက်ကြည့်ပါ
Medicalsharing is News, book, Cooking ,knowledge,Feeling website. We provide you with the latest breaking news stories everyday.
Articles are displayed in text, video and photo. Visitors can read news in articles type of categories in https://medicalsharing.website(example – News, Knowledge, book….etc).